Wiil Soomaali ah oo dawlada Mareykanka dacwad ku soo oogaya (Sawiro) – SBC
Wiil Soomaali ah oo dawlada Mareykanka dacwad ku soo oogaya (Sawiro)
Guuleed Maxamed oo ah wiil asalkiisu yahay Soomaali balse qaatey dhalashada Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in uu dawlada Mareykanka waaxda cadaalada u qaabilsan uu maxkamad la fuuli doono.
Wiilkan oo ku nool gobolka Virginia oo 19 sano jir ah waxaa lagu xiray wadanka Kuwait isagoo mudo bil ah xabsi uu ku jiray si xun loogu jirdilay sida uu sheegayna koronto lagu qabqabtey jirkiisa, mudo dheerna uu istaagsanaan jiray isagoo sheegay in si xun loola dhaqmay.
Guuleed wuxuu sanadkii 2009-kii u ambabaxay Yemen & Soomaali si uu u booqdo qoyskiisa balse wuxuu mar kale aaday dalka Kuwait halkaasi oo xabsi loo taxaabay, iyadoo dawlada Kuwait ay sheegtey in wiilkan qabashadiisa ay dalbatey xukuumada Mareykanka isla markaana uu ku jiro liiska dadka aan duuli karin (No Fly List).
Guuleed Maxamed wuxuu sheegay in intii ku jiray xabsiga Kuwait ay su’aalo waydiiyeen saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka Mareykanka ee FBI-da, kuwaasi oo baaritaan ku sameynayey lugta wiilkan uu la leeyahay wax loogu yeeray kooxaha xagjiriinta Soomaaliya, iyadoo ay jireen eedeymo ka soo baxay xeer ilaalinta Mareykanka oo sheegay in wiilkan uu xiriir la leeyahay Anwar Al-Amriki oo ah nin Mareykan ah oo la safan xarakada Al-Shabaab. Laakiin eedeymahaasi Guuleed si adag ayuu u beeniyey wuxuuna sheegay inaanu aqoon Anwar Al-Amiriki iyo wax argagixiso ah waxaana uu sheegay in dalalka Carabta uu u tagey si uu soo salaamo qoyskiisa iyo in uu barto luuuqada Carabiga. Guuleed wuxuu dib ugu laabtey gurigiisa Virginia ee Mareykanka bishii January ee sanadkan 2011 ka gadaal markii laga sii daayey xabsiga ku yaal Kuwait. Maanta oo jimce ah ayaa maxkamad ku taal gobolka Virgina waxay dhageysanaysaa dooda uu qabo Guuleed ee ah in dawlada Mareykanka ay si qalad ah ugu dartey magaciisa liiska dadka aan duuli karin (No Fly List).